Hospitals — Ohio Department of Job and Family Services U bood waxyaabaha ugu waaweyn
Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Aabannimada ee Ohio (CPR) ayaa waxay ku dadaaleysaa sidii loo hubin lahaa in dhammaan isbitaalada iyo xarumaha lagu dhalayo lagu waxbaro muhiimadda aasaasidda aabannimada.
Ohio CPR waxay qalab waxbarasho u qaybisaa isbitaalada markay codsadaan, taas oo loo adeegsan karo in kor loogu qaado muhiimadda aasaasidda aabanimada. Dhammaan qalabka ayaa waxaa laga heli karaa hoos.
→ Liiska Xarumaha Dhalmada
→ Sharciyada iyo Xeerarka ee Lawriter -ka Ohio
Buug-yaraha af Ingiriisiga ah
Buug-yaraha af Isbaanishka ah
Buug-yaraha af-Soomaaliga ah
Qawaaniinta barnaamijka Aabbanimada ee ku saleysan Isbitaalka
Taariikhda ay Bilaabanayso: 03-22-2001.
3111.71 Heshiisyada isbitaalada si ay ula kulmaan haweenka aan la qabin ee dhalaya.
Waaxda Adeegyada Shaqada iyo Qoysku waxay heshiis la geli doontaa isbitaallada maxaliga ah si ay u bixiyaan shaqaale oo la kulmo haweenka aan guursan ee ku dhala gudaha ama u socdaalaya isbitaalkaasi.
Wakhtigaa ama ka hor 1-da Abriil1998, isbitaal kasta wuxuu heshiis la geli doonaa waaxda adeegyada Shaqada iyo Qoyska iyadoo la tixraacayo qaybtan ku saabsan waajibaadka lagu soo rogay qaybtan iyo qaybta 3727.17 ee Xeerka Dib loo Eegey ee ku saabsan aasaasidda aabannimada.
Isbitaalkii heshiiska geli waayo waa in uusan ka helin karin khidmadda waaxda ee warqadaha dhaarta ee sida saxda ah loo saxiixay, lana nootaayeeyay ee uu soo gudbiyay isbitaalka.
Taariikhda la bilaabayo: 03-22-2001.
3111.72 Shuruudaha heshiisyada isbitaalada si ay ula kulmaan haweenka aan la qabin ee dhalaya.
Heshiiska u dhexeeya Waaxda Adeegyada Shaqada iyo Qoyska iyo isbitaalka maxalliga ah ayaa u baahan inay buuxiyaan dhammaan waxyaabaha soo socda:
(A) In isbitaalku uu bixiyaa qof shaqaale ah si uu ula kulmo hooyo kasta oo aan la qabin oo ku dhashay gudaha isbitaalka ama u socota isbitaalka ilaa afar iyo labaatan saacadood gudahood ee dhalmada ama ka hor inta hooyada laga soo sii daayo isbitaalka;
(B) In shaqaaluhu isku dayaan inay la kulmaan aabaha ilmaha hooyada aan la qabin haddii ay suurtagal tahay.
(C) In shaqaaluhu ay u sharxaan hooyada iyo aabaha aan is qabin, haddii uu joogo, faa&#39;iidada ay u leedahay ilmaha ee aasaasidda xiriirka waalidka iyo ilmaha oo u dhaxeeya aabaha iyo ilmaha iyo qaababka habboon ee loo aasaasayo xiriirka waalidka iyo ilmaha;
(D) In shaqaaluhu ay u bandhigaan buug-yaraha ama bayaanka hooyada aan la qabin iyo, haddii ay suurtogal tahay, ee ku saabsan xuquuqda iyo masuuliyadaha waalidka dabiiciga ah taasi oo ay diyaarisay ayna bixisay Waaxda Adeegyada Shaqada iyo Qoyska sida waafaqsan qaybta 3111.32 ee xeerka dib loo saxay;
(E) Inay shaqaaluhu ay siiyaan hooyada iyo, haddii ay suurtagal tahay, aabahaa, dhammaan foomamka iyo bayaannada ee lagama maarmaanka u ah inay si iskood ah u aasaasaan xiriirka waalidka iyo ilmaha, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, qirashada dhaartaa aabaha (JFS 07038) taasi oo ay diyaarisay waaxda adeegyada shaqada iyo qoyska sida waafaqsan qaybta 3111.31 ee Xeerka Dib loo Eegay;
(F) In qofka shaqaalaha ah, marka labada hooyada iyo aabaha codsadaan inuu ka caawiyo hooyada iyo aabaha inay buuxiyaan foom kasta ama qoraallada lagama maarmaanka u ah sidii loo aasaasi lahaa xiriirka waalidka iyo ilmaha;
(G) Isbitaalku wuxuu bixiyaa nootaayada dadweynahasi ay u nootaayeeyaan qirashada dhaarta aabannimada (JFS 07038) oo ay saxiixeen hooyada iyo aabaha;
(H) In shaqaaluhu ay usoo jeediyaan hooyada aan la qabin oo aan ka qaybqaadanin barnaamijka koowaad ee Ohio ee lagu aasaasay Cutubka 5107. ee Xeerka Dib loo Eegay ama helaya Codsiga Medicaid ee Adeegyada Title IV-D;
(I) In shaqaaluhu uu u gudbiyo wixii qirasho aabannimada ah oo dhammaystiran xafiiska taageerada ilmaha ee Waaxda Adeegyada Shaqada iyo Qoyska ugu dambeyn toban maalmood kadib marka la dhammeeyo;
(J) In Waaxda Adeegyada Shaqada iyo Qoysku ku bixiyaan lisbitaalka labaatan doolar oo loogu talagalay warqadda qirashada dhaarta aabannimada (JFS 07038) kastaa ee sida saxda ah looga saxeexay loogana nootaayeeyay isbitaalka.
Waxaa wax ka beddelay Golaha Wada-xaajoodka ee gal lambarka 25, HB 59, §101.01, laga bilaabo. 9/29/2013.
3111.74 Qirashada khilaafsan ee la xiriirta uqaadashada aabannimada.
Haddii isbitaalku ogyahay ama go&#39;aansado in nin lagu tiriyo sida hoos timaada qaybta 3111.03 ee Xeerka Dib loo Eegay inuu yahay Aabaha Ilmaha iyo in aabaha la aaminsan yahay uusan aheyn qofka saxiixay ama isku dayaya inuu saxiixo qirasho la xiriirta cunuga, isbitaalku ma qaadi doono talaabo dheeri ah marka loo eego qirashada u mana diri doono qirashada xafiiska Taageerada Ilmaha.